SEO အတွက်အောင်မြင်သော Blogging လုပ်နည်း ၂၅ ချက် Martech Zone
စနေနေ့, သြဂုတ်လ 1, 2009 တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီ 24, 2016 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်ယခုလုပ်ဆောင်နေသောစီမံကိန်းများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ Blog Indiana တွင် SEO အတွက်ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ရန်တက်ရောက်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော ebook ဖြစ်သည်! မည်သူမဆိုဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းအားအမြတ်အစွန်းများပြားစွာရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးအတွက်မည်သူမည်ဝါကိုအသုံးချနိုင်သည်ကိုပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ချက်များဖြင့်စာအုပ်သည်ပလက်ဖောင်းများနှင့်ရွေးချယ်စရာများအားလုံးပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ အောက်ဖော်ပြပါအခန်းများတွင် ebook တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည် -
ဘာကြောင့် Blogging အလုပ်လုပ်ရတာလဲ
သင်၏ Domain ကိုရွေးချယ်ခြင်း
သင့်ရဲ့ Blog ကိုဒီဇိုင်း
Meta Data မြှင့်တင်မှု
အသုံးပြုသူ Generated အကြောင်းအရာ
သင့် Blog ကိုစည်းညှိခြင်း
အဟောင်းအကြောင်းအရာ Re- လောင်ကျွမ်းခြင်း
UPDATE - ဤစာအုပ်သည်အလွန်ရေပန်းစားသောကြောင့်စာအုပ်တစ်အုပ်သို့ ဦး တည်သွားသည်။ အမှာစာ Dummies အတွက်ကော်ပိုရိတ် Blogging ယခု!
Tags: စာအုပ် bloggingebook bloggingseo အတွက် bloggingblogging အကြံပေးချက်များရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းDummies များအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်Post ပတ်ကျိသင့်ရဲ့ Blog ကိုဒီဇိုင်းသင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်တိုးချဲ့Backlinks ထုတ်လုပ်ခြင်းမြေပုံပေါ်ရယူခြင်းဧည့်သည်ဘလော့ဂ်သော့ချက်စာလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာMeta Data မြှင့်တင်မှုရှာဖွေရေးကိုစောင့်ကြည့်သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်မြှင့်တင်ရေးအဟောင်းအကြောင်းအရာ Re- လောင်ကျွမ်းခြင်းရှာဖွေခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစက်ရုပ်များနှင့် Sitemapသင့်ရဲ့အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းသင်၏ Domain ကိုရွေးချယ်ခြင်းသင်၏ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းseoလူမှုမီဒီယာပေါင်းစည်းမှုသင့် Blog ကိုစည်းညှိခြင်းCustom ည့်သည်များကိုဖောက်သည်များအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းရှာဖွေခြင်းကိုနားလည်ခြင်းအသုံးပြုသူထုတ်ပေးအကြောင်းအရာဘာကြောင့် Blogging အလုပ်လုပ်ရတာလဲဘလော့ဂ်များအတွက်ရေးသားခြင်းPost ခေါင်းစဉ်ရေးသားခြင်း